China Thermal Break Aluminium Window & Door Fanamboarana sy Factory | Huajian
Fantsom-baravarankely sy varavarana mihidy aluminium
Fantatrao ve fa tsy dia nampiasaina firy taona ny mombamomba ny fiatoana mafana? Misaotra ireo orinasa toa ny Huajian Technologies, ny milina ilaina amin'ny fikirakirana ireo mombamomba ny fiatoana mafana dia efa misy ankehitriny. Fa inona fotsiny no atao hoe fiatoana mafana, ary maninona no vaovao be toy izany?
Marterials, semi-vokatra, vokatra vita. Famatsiana 1-fijanonana.
Fialan-tsasatra: Izay rehetra ilainao ho fantatra momba ireo profil ireo
Ny fananganana dia namboarina avy amin'ny fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny aluminium. Angamba ianao manao profil aluminium ary efa mahalala izay fitaovana tsara indrindra ho an'ny baravarankely sy varavarana. Maizina sy mateza izy io, mahazaka karazan-toetrandro rehetra ary matanjaka be. Na izany aza, tsy misy fiatoana mafana dia mety hiteraka olana satria ny aliminioma koa dia mpampita hafanana mahomby. Raha tsy misy fiatoana mafana dia ho mafana be amin'ny masoandro ny mombamomba anao ary tena mangatsiaka amin'ny lanezy sy orana. Raha ny tena izy, dia mamoaka hafanana na ivelan'ny manodidina azy izany ka raha tsy manana fiatoana mafana ny profil ankehitriny dia hiatrika ny olana sasany izay fahita tamin'ny lasa isika. Anisan'izany ny conduction, bobongolo ary ny dampand tsy misy fiatoana mafana ao anaty frame izay ho mangatsiaka amin'ny ririnina ny tranonao ary mafana sy ho feno setroka amin'ny fahavaratra. Tsy mahafinaritra fotsiny ny mando sy ny fanondranana, ny baravarankely tsy misy fiatoana mafana dia mety hidika ho faktiora avo kokoa amin'ny fanafanana. Amin'ny toe-javatra faran'izay mafy, ny hamandoana dia mety hiteraka fahasambarana ara-drafitra, noho izany dia mora ny mahita ny antony mahatonga ny mombamomba ny fiatoana mafana no safidy tsara. Ary mahery tokoa izy io. Na izany aza, tsy misy fiatoana mafana dia mety hiteraka olana satria ny aliminioma koa dia mpampita hafanana mahomby. Raha tsy misy fiatoana mafana dia ho mafana be amin'ny masoandro ny mombamomba anao ary tena mangatsiaka amin'ny lanezy sy orana. Raha ny tena izy, dia mamoaka hafanana na ivelan'ny manodidina azy izany ka raha tsy manana fiatoana mafana ny profil ankehitriny dia hiatrika ny olana sasany izay fahita tamin'ny lasa isika. Anisan'izany ny conduction, bobongolo ary ny dampand tsy misy fiatoana mafana ao anaty frame izay ho mangatsiaka amin'ny ririnina ny tranonao ary mafana sy ho feno setroka amin'ny fahavaratra. Tsy mahafinaritra fotsiny ny mando sy ny fanondranana, ny baravarankely tsy misy fiatoana mafana dia mety hidika ho faktiora avo kokoa amin'ny fanafanana. Amin'ny toe-javatra faran'izay mafy, ny hamandoana dia mety hiteraka dame struktural, noho izany dia mora ny mahita ny antony mahatonga ny mombamomba ny fiatoana mafana no safidy tsara.
Ary miaraka amin'ireo injenieranay, dia lasa orinasa mitarika 3 lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny extrusion aluminium izahay.
Manana ny mombamomba ny fiatoana mafana mihoatra ny 50 andiany ary mifanaraka amin'ny faritra samihafa eran'izao tontolo izao. Ny mombamomba ny fiatoana mafana dia 50mm ka hatramin'ny 120mm ataovy amina toerana samihafa ny vahaolana maro.
Andiany: GR60-70 Casement
· Ny haben'ny endriny dia 60-70MM, ary ny haben'ny faritra hita dia 45MM. Ny haben'ny fantsom-baravarankely dia 69MM, ary ny haben'ny velarantany hita dia 84MM.
· Ny famaritana fitaratra, afaka manao lavaka fitaratra roa, vera telo ary loaka roa lehibe.
· Ny fanamafisam-peo ho an'ny fitaovana iraisam-pirenena, ny kojakoja iraisana eny an-tsena, manatsara ny fifantenana.
· Ny varavarankely fanakona misy mesh diamondra dia azo fidina hahazoana vokatra anti-moka sy fanoherana halatra.
· Azo atambatra amin'ny rindrin'ny ambainy sy ny varavarankely raikitra mba hamoronana endrika endrika maro karazana, ary azo sokafana ao anatiny sy ivelany koa
· Ny fitaovana dia namboarina tamin'ny toeran'ny tsipika adhesive marobe, izay mety hahatratra vokatra maro amin'ny famehezana, fanamafisam-peo, fanamafisana ny hafanana, tantera-drano ary fihenan'ny rivotra tsara kokoa
· Ampiasaina amin'ny tsipika havanana sy ny tsindry ny tsipika mba hanatsarana ny hatsaran'ny vokatra
· Avo ny fanoherana ny tsindry rivotra ary azo ampiasaina amin'ny tranobe avo.
Andian-dahatsoratra: fiatoana mafana GR80-120 Sliding
· Haben'ny haben'ny 80, 100, 120MM, haben'ny endrika hita maso 50MM, haben'ny fantsom-baravarankely 58MM, haben'ny 90MM hita maso
· Matetika ny fitaovana vita amin'ny frame, ny andian-dahatsoratra mpankafy telo dia mahazatra, izay manatsara be ny fahaizan'ny materialy ary mamonjy fitaovana.
· Rongony draine mahaleo tena, fahombiazan'ny draine tsara.
· Ampiasaina amin'ny tsipika zoro ankavanana sy tsindry zoro, hanome anao trano azo antoka kokoa.
Izahay koa dia manana ny rafitra fialan-tsasatra namboarinay tena izay maneho ny
Haavo avo lenta Varavarankely sy varavaram-baravarana rafitra fiatoana termika.
Ny orinasa dia mandray ny eritreritra mandroso Eoropeana, manadihady ary mampivelatra ny rafitra fikandrana fikotrananana varavarankely sy varavarana misimisy kokoa, ary miasa amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina.
Ny vavam-baravarana hafanana sy ny fiatoana Eoss dia maneho ny kalitao avo indrindra amin'ny indostria aliminioma
Andian-tsarimihetsika, andian-tsarimihetsika, na inona na inona tianao hampiasaina amin'ny varavarankely sy ny varavaranao, dia hofenoinay hatrany ny takiana aminao.
Teo aloha: Mombamomba ny alimina fiara
Manaraka: Profil aluminium mahazatra
Profil aluminium mahazatra